ह्यारी होल २०१ 2017 मा फर्कन्छ - नयाँ उपन्यास र फिल्म | वर्तमान साहित्य
ह्यारी होल २०१ 2017 मा फर्कन्छ - नयाँ उपन्यास र चलचित्र
तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। मादक र अप्रत्याशित तर अपवाद ओस्लो प्रहरी निरीक्षक ह्यारी होल, आफ्नो अत्यधिक प्रशंसित श्रृंखला मा एक एघारौं शीर्षक फर्काउँछ। त्यसोभए एक्युलिडाड लिटरेटुरामा मेरो डेब्यू उहाँसँग हुनुपर्‍यो, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने विधाको सबैभन्दा ठूलो सन्दर्भ हो: कालो। उनका बुबा, नर्वेली जो नेस्बे, उहाँ ओडिनका धेरै छोराहरूमध्ये एक साहित्यका लागि समर्पित महान् हुनुहुन्छ।
ह्यारी, उनको सबैभन्दा प्रशंसनीय प्राणी, पीडित र पछि हजारौं समर्पित र भावुक पाठकहरू (म) नयाँ उपन्यासमा फर्कन्छन्। तपाईंको शीर्षक, तिर्खा (तिर्खा), अबको लागि बिक्रीमा जान्छ केवल मे,, २०१। मा ए Anglo्ग्लो-सेक्सन बजारमा। बाँकी गैर-अ English्ग्रेजी-बोल्ने पाठकहरूको लागि हामीले याद गर्न पर्खनु पर्नेछ जब रेन्डम हाउसले यसलाई प्रकाशित गर्छ, जसले सम्पूर्ण श्रृंखला पुन: जारी गर्दैछन्। तर यसै बीचमा अक्टूबरमा हामीसँग फिल्म अनुकूलन हुनेछ हिममानव, सातौं शीर्षक र शायद सबैभन्दा लोकप्रिय र सफल।
यसको बारेमा के हो? तिर्खा?
अघिल्लो उपन्यासहरू पढेका जो कोहीले थाहा पाउनेछन् कि कहिले, कहाँ र कसरी हामीले ह्यारीलाई छोडेका थियौं पुलिस, अन्तिम। ओस्लोको सडकमा अर्को हत्यारा पनि छ जसको सिकार अनलाइन डेटि network नेटवर्क टिन्डरका प्रयोगकर्ताहरू हुन्। ह्यारी गर्न मोडस परिचालन यो उनको कसैलाई सम्झना दिलाउँछ जो विगतमा उसको नेमेसिस मध्ये एक थियो। अनुभवी पाठकले पक्कै पनि यो सम्झन सक्छ कि यो कसले सन्दर्भ गर्न सक्छ। त्यसो भए हुनसक्छ तपाईंसँग पेन्डिंग खाताहरू छन् त्यो भूत र वर्तमानसँग मिलाप गर्न।
म यसलाई समीक्षा गर्न प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नेछु। मेरो मात्र गुनासो यो छ कि त्यहाँ पुराना नेस्ब पुस्तकहरू अझै बाँकी छन्। स्पेनिशमा प्रकाशित छैन, जस्तो कि छोरा, हिउँमा रगत o मध्यरातको सुर्य। तर क्यारिज्म्याटिक इन्स्पेक्टर होल उनीहरूमा तारा गर्दैनन् र हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूले यति राम्रो तरीकाले काम गरेका छैनन्। हामी सहमत छौं कि तिनीहरू प्रकाशकका मापदण्डहरू सम्बन्धित देशका प्रकाशन अधिकारहरूसँग छन्। यद्यपि यो लेखकका वफादार पाठकहरूका लागि यो अझै लाजमर्दो छ। नेस्बेलाई केवल ह्यारीले मात्र अंकित गरेका थिए, तर उनको शैलीबाट, उनी स्तब्ध पार्ने कथा घुमाउने र उनको कुशलताका साथ। यो स्वीकार्य छ रूपमा cheeky।
भाग्यवस म तिनीहरूलाई पढ्न सक्षम भएको छु र म मेरो टोपीलाई उनीहरूको राम्रो काममा लैजान्छु। सबैको साथ, समेत बच्चाहरू (and र १२ बीच उमेरका बच्चाहरूको लागि), जुन धेरै हास्यास्पद, कल्पनाशील, र वयस्क लेखन जत्तिकै अँध्यारो हुन्छ।
चिसो बाट मेरो शेल्फ
यसलाई स्विडेनी निर्देशक टोमस अल्फ्रेडसनले निर्देशित गरेका छन् र जर्मन-आयरिश अभिनेतालाई अभिनय गरेका छन् माइकल Fassbender। यसको प्रीमियर निर्धारित गरिएको छ 17 अक्टोबरको 2017। हलिउड पछाडि छ र त्यहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध कास्ट छ। तर त्यहाँ यसको सफलताको बारेमा बहस छ, विशेष गरी Nordic वेबसाइटहरु र फोरमहरु मा, जो घर मा स्वीप, अर्कोतर्फ राम्रो कारण संग।
यहाँ वरिपरि केही धेरै नम्र प्रशंसकहरू समय - समयको लागि र यसको विपरित खोल्दछन्, यद्यपि मध्यममा। हामीसँग धेरै उम्मेद्वारहरू थिए, तर हामीले अनुमान लगायौं जुन पहिले नै तथ्य हो। हामी धेरै जसो कुरामा सहमत छौं साहित्यिक Harry Hole (धेरै लामो, गोरा र टक्कै) को भौतिकविद्को अनुपस्थितिका कारण श्री Fassbender सबैभन्दा उपयुक्त देखिदैन। म कुनै छवि राख्ने छैन ताकि यसको चरित्र वर्णन गर्न सकोस्। यद्यपि हामी त्यसमा संलग्नको राम्रो CV र नर्वेको राजधानीमा सेटिंग गर्न प्रतिबद्ध छौं। त्यसो भए हामी भरोसा राख्छौं जब एक राम्रो उत्पादन बाहिर आउनेछ।
उपन्यासको फिल्म रूपान्तरण एक आवर्ती विषयवस्तु हो र ती सामान्यतया उनीहरूको साहित्यिक मूलमा गुमाउँछन्, तर त्यहाँ केही अपवादहरू छन्। आशा छ यो एक हो त्यस्तो उत्कृष्ट क्यारेक्टरहरू, प्लॉट र सेटिंगको लागि बार र गुण राख्नुहोस् तिनीहरूका सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई योजना बनाउनुभयो।
तपाईको वेबसाइटमा श्री नेस्बेको बारेमा सबै कुरा छ। जो Nesbø.com (अङ्ग्रेजीमा)। र फेसबुकमा पनि हामी छन् जो Nesbø मा लगाइएको, जहाँ हामी जीवन र मायाको नामले एच एच र चिसो उत्तरका अन्य जीवहरूको आश्चर्यकर्महरू छलफल गर्दछौं। यो पहिलो लेख तिनीहरूलाई समर्पित छ। हामीसँग भएको राम्रो समयहरू वाइकिsहरूको लागि। टक.
संक्षिप्तमा, एक्चुलीडाड लिटरेटुरामा यो नयाँ अनुभव सुरु गर्न पाउँदा खुशी लाग्यो। केहि पाठकहरूले मलाई अन्य साहित्यिक कारनामहरूबाट जान्न सक्छन्। बाँकीका लागि, मलाई ठूलो अभिवादन र तपाईंलाई हुक गर्ने आशा प्रदान गर्नुहोस् पढ्न र लेखन को रसदार विषयहरूको साथ। म तिनीहरूलाई मान्यता प्राप्त प्लेटफर्मको आधिकारिक प्रिज्मको साथ र मेरो सबैभन्दा अनौपचारिकसँग उत्तम तरिकामा गणना गर्न प्रयास गर्नेछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » ह्यारी होल २०१ 2017 मा फर्कन्छ - नयाँ उपन्यास र चलचित्र
म आफूलाई श्रीमान नेस्बोको बारेमा र "विशेष गरी उनको सबैभन्दा प्यारो छोरा" ह्यारी होलको बारेमा "भावुक" भनेर परिभाषित गर्दछु। र म तपाईंको पछिल्लो उपन्यास अगाडि हेर्छु। धेरै धेरै मारियोला धन्यबाद। म तपाईंलाई पछ्याउनेछु, नेस्बो र यो धेरै राम्रो साहित्यिक ब्लग।
मुरी मुरी धन्यवाद। मलाई आशा छ कि राम्रो विचारहरु संग जारी छ र तपाइँ त्यहाँ हुनुहुन्छ।
हामीलाई थाहा छ कि एच एच सधैंभरि रहनेछैन, कि नेस्बेले उसको लागि उसको तयारी तयार पारेको छ र उसलाई भेट्नु सजिलो हुँदैन, तर हामी यो नयाँ पुस्तकको लागि अधीर छौं। कृपया अर्को होइन, कृपया। एक पछि अर्को र ती धेरै छन्।
तपाईंले हामीलाई सूचित गर्नुहुनेछ।
धन्यबाद, इसाबेल। त्यहाँ म यसको लिने कुरा गणना गर्दैछु।
एरासेल-ली रियरा फेरेर भन्यो
र हामी मध्ये जो अंग्रेजी वा नर्वेली भाषा बोल्दैनौं, तपाईको सारांश पढ्न सक्षम हुनु अति भाग्यमानी हो।
एउटा टिप्पणी: अर्को दिन मैले फिल्म «स्टीव जॉब्स saw देखें, श्री फसबेन्डर अभिनित ……। म वास्तवमै हाम्रो हेरी होल हेर्न सक्दो कोसिस गर्न सक्दिन ....... जब तपाईंसँग कुनै चरित्रको राम्रो वर्णन छ भने कम्तिमा (कम्तिमा मेरो लागि) उसलाई त्यस्तो व्यक्तिसँग संगत गर्न गाह्रो हुन्छ जो एकल पहिचान गर्न मिल्दैन। ।
Aracel-li Riera Ferrer लाई जवाफ दिनुहोस्
म तिमीलाई के भन्न सक्छु, अरसेली? तपाईंलाई यसको बारेमा मेरो राय थाहा छ। तर जे भए पनि, के बाहिर आउँछ हेरौं।
मारिया डेल कारमेन रुइज डे लास रुइज डे लास रुइज डे लास हेरास भेलेज भन्यो
अधिक चाँडो होल प्लीज .....
मारिया डेल कारमेन रुईज डे लास रुइज डे लास रुइज डे लास हेरास भेलेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया डेल कार्मेन रुइज डे लास हेरास भेलेज भन्यो
अधिक चाँडो होल प्लीज …… ..
मारिया डेल कार्मेन रुइज डे लास हेरास भेलेजलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाई लेखक बन्न चाहानुहुन्छ? उम्बर्टो इकोबाट यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस्
गार्सिया लोर्का परिवारले कविलाई खोजिन नदिन आग्रह गरे